I-Cannabidiol. I- Cannabidiol iyi-phytocannabinoid eyatholak
ⓘ I-Cannabidiol. I- Cannabidiol iyi-phytocannabinoid eyatholakala ngo-1940. Ingenye yezingama-113 ezikhonjwe ngama-cannabinoids ezitshalweni ze-cannabis nama-akha ..
I- Cannabidiol iyi-phytocannabinoid eyatholakala ngo-1940. Ingenye yezingama-113 ezikhonjwe ngama-cannabinoids ezitshalweni ze-cannabis nama-akhawunti afinyelela ku-40% kokukhishwa kwesitshalo. Ngo-2018, ucwaningo lomtholampilo nge-cannabidiol lufake nezifundo zokuqala zokukhathazeka, ukuqonda, ukuphazamiseka kokuhamba, nobuhlungu.
I-cannabidiol ingathathelwa emzimbeni ngezindlela eziningi, kufaka phakathi ukuhogela intuthu noma umusi we-cannabis, njengesifutho se-aerosol esihlathini, nangomlomo. Kunganikezwa njengamafutha we-CBD aqukethe i-CBD kuphela njengesithako esisebenzayo asifakwanga i-tetrahydrocannabinol noma i-terpenes, isitshalo se-hemmp egcwele i-CBD egcwele izitshalo, amaphilisi, i-cannabis eyomisiwe, noma njengesixazululo soketshezi esihlinzekiwe. I-CBD ayinayo i-psychoactivity efanayo ne-THC, futhi ingashintsha imiphumela ye-THC emzimbeni uma bobabili bekhona. Kusukela ngonyaka we-2018, indlela yokusebenza yezenzo zemiphumela yayo ye-biological ayikaze inqunywe.
E-United States, isidakamizwa se-cannabidiol i-Epidiolex savunywa ngabakwaFood and Drug Administration ngonyaka we-2018 ukwelashwa kwezifo ezimbili zesifo sokuwa. Njengoba i-cannabis iyi-schedule I elawula into e-United States, ezinye izindlela zokwenziwa kwe-CBD zihlala zingekho emthethweni ukunquma ukusetshenziswa kwezokwelapha noma ukusebenzisa njengesithako ekudleni noma kwezithasiselo zokudla.
1. Okuqhamuka uma udla imishanguzo
Ucwaningo olwandulelayo lukhombisa ukuthi i-cannabidiol inganciphisa imiphumela emibi ye-THC, ikakhulukazi leyo ebangela ukudakwa kanye ne-sedation, kepha kuphela ngemithamo ephezulu. Izifundo zokuphepha ze-cannabidiol zikhombisile ukuthi ziyabekezeleleka kahle, kepha zingadala ukukhathala, isifo sohudo, noma ushintsho ekudlaleni njengemiphumela emibi ejwayelekile. Imibhalo ye-Epidiolex ibala ukulala, ukuqwasha nokulala kahle, ukunciphisa isifiso sokudla, isifo sohudo nokukhathala.